San Htun's Diary: ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ဗျာ - ၈
စန်းထွန်းနဲ့ အမနဲ့ တူလိုက်တာ။ အမလဲ ဘိလပ်ကို လာခဲ့တာ ဒုက္ခနဲ့လှလှ တွေ့ရတယ်ဆိုပြီး နောင်တ ရနေတာ။ မိဘတွေကိုလဲ ကိုယ်အဆင်ပြေပါတယ်လို့ တခါမှ မညာဘူး ဟိဟိ။ သူတို့ခမျာ ကိုယ့်အတွက် အမြဲပဲ စိတ်ပူနေရရှာတယ်။
အင်း ... မှုန်ဝါးဝါးနဲ့ လမ်းပျောက်နေတာလဲ တူပြန်ရော ... မသေချာခြင်း မရေရာခြင်းတွေ အပြည့်နဲ့ ... ဘယ်တော့မှ ပြီးဆုံးမလဲ မသိ ... ။ တူတူပါပဲ စန်းထွန်းလေးရေ ... ။
ဟုတ်တယ်၊ ကျောင်းတက်တုန်းကလည်း ကျောင်းမို့လို့၊ ပြီးခါနီးတော့လည်း အလုပ်ရှာရမှာမို့လို့နဲ့ ပူပန်မှုတွေက ကုန်ပဲ မကုန်နိုင်ဘူးဗျာ၊ ဒီလိုပဲ အပြန်အလှန် အားပေး၊ ခရီးဆက်ကြရမှာ ပါပဲ၊ ရီစရာတွေကို ပီဇာနဲ့သာ တွေးပေတော့ ညီမရေ...။း)
ရှုံးနိမ့်မှုဆိုတာကို ကြုံရတဲ့အခါ ကြံ့ကြံ့ခံတတ်အောင်၊ မတ်တပ်ရပ်နိုင်အောင် သင်ယူခဲ့တယ်။ တယောက်တည်း ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းတတ်အောင် သင်ယူခဲ့တယ်။
ကြည့်ရင်းနဲ့ လွင်ပြင်မျက်နှာမြင်မိတယ် ဂျက်က လွင်ပြင်ကို
လူတိုင်းပါပဲ စန်းထွန်းရေ..ဒုက္ခအထူကြီးတွေ ရှိနေကြပါတယ် ဖွင့်မပြောကြလို့သာ... (ထပ်ဆင့်ကော်ပီ....)..:P:P
အောင်မြင်မှုဆိုတာ ကိုယ်လိုချင်တာကို ရတာ
ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ ကိုယ်ရတာကို ကျေနပ်တာ တဲ့
အောင်မြင်မှုနဲ့ ပျော်ရွှင်မှု တစ်ထပ်တည်းကျပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းပေးရတော့မှာပ...
အပေါ်ပိုင်းက နည်းပညာဝေါဟာရတွေကို ဦးဟန်ကြည်ခမျာ နားဝေးရှာလွန်းလို့ ဒစ်ရှင်နရီပါ လှန်ဖတ်ယူရသကွယ်...
အစစအရာရာအားလုံး အဆင်ပြေချောမွေ.ပါစေ။ပျှော်ရွှင်စွာနဲ. ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ လို .မောင်မောင် ဆုတောင်းပေးပါတယ်
ကြီးကို အနွေးထည်လိုဝတ်ထားရတာ....၊တစ်ချိန်မှာ သက်
Please let me know the job search sites addresses in USA.Thanks.
မမေနဲ့ စန်းထွန်း ဘဝတူ..
မမအိုင်အိုရာ ဆုံရင် လုစားရအောင်နော်..:P
မမီးငယ် အလုပ်လျှောက်ရင်း longisland တွေ့ တော့ မမီးငယ်ကို သတိရမိသေးတယ်..
လူဇိုး အိန်ဂျယ်လှိုင် သူများ ကော်ပီကူးတာကို သူက ထပ်ကော်ပီကူးတယ် :D ...
ပစ်ပစ် ဟုတ်ကဲ့ပါ ခင်ည..
ဆြာဟန် ကျော်ဖတ်လိုက်တာ မဟုတ်ဘူး..ဒုက္ခရှာလို့ ဗျာ :P...
တီတင့် ဒီလိုပဲ မျှော်လင့်ပါတယ်ဂျာ..
မောင်မောင် ပေးတဲ့ဆု ပြည့်စေဗျား...
ကိုညိမ်းနိုင် ရေက အမြဲ စီးနေတော့လည်း ခက်သားဂျ..
Anonymous အသက်သာ အသေခံမယ်..လုံးဝပြောဝူး :P...
ဟိုနှိုက် ဒီနှိုက်.. နှိုက်စားသွားပြီ...း)